Ukwenza ubhiya ne-Coffee Flavour-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ukuphisa Ubhiya neCofi Flavour
Isikhathi: 2020-07-10 Amazwana: 16
Kungokokuqala ngami ngipheka ubhiya ngophuzo lwekhofi, i-brewer yethu yasifundisa igxathu negxathu ngayo yonke imininingwane, yize i-wort ngaphambi kokuvutshelwa inganambisanga okuhle, siyajabula ukubona ukuthi imvubelo izokwenzani.
Eqinisweni kusengakabi lula kimi ukuqonda yonke inqubo yokuxubha, ukugeza, ukubilisa kanye ne-whirlpool. Zingaki izingilazi nekhofi esizokudla? Ukufudumeza nini futhi ngani? Ungasilawula kanjani isikhathi esifanele?
Le mibuzo ingaphezu kwekhanda lami ngokuphelele. Manje sesiyayibona imisebenzi yokulayisha esindayo okufanele yenziwe abenzi bokubeletha nsuku zonke, futhi sinomqondo wokuhlanganisa ithangi lamanzi ashisayo nendawo yokufudumeza uwoyela ye-thermail.
Ukuze uthole ezinye izindlela zokupheka ubhiya ezinambitheka ehlukile, sicela uchofoze lapha ukuze uxhumane nathi.
Previous: Ngabe Ufuna I-Professional Brewing Tank Eduze?
Okulandelayo: Fingqa Umphumela Wendlela Ye-Coff Yokufaka Ubhiya Nekhofi